ISITHOMBE: ‘Amabhulukwe abambanayo ayingozi kwezokuphepha ezikoleni’ | News24
ISITHOMBE: ‘Amabhulukwe abambanayo ayingozi kwezokuphepha ezikoleni’
Johannesburg – Amabhulukwe abambanayo (skinny pants) angase abe yingozi kwezokuphepha ezikoleni, uNgqongqoshe wezeMfundo eGauteng, uPanyaza Lesufi, utshele iHuffPostSA ngoMsombuluko.
Lokhu kuphawula kwakhe kuze njengoba abafundi ababebhikisha esikoleni iHoerskool Pretoria West beye baduba amakilasi, befuna ukuvunyelwa ukuthi bagqoke ama-skinny pants ngoLwesihlanu.
“Ngale kweqiniso lokuthi amabhulukwe abambanayo azothikameza ukuziqoqa, ukulawuleka kanye nokuziphatha ezikoleni, ngikhathazekile ngoba noma ngabe ubani angangena futhi aphume esikoleni, angeke uze ukwazi ukuhlukanisa ukuthi yiziphi izingane zesikole,” uLesufi usho kanjalo.
Bonke abafundi baseHoerskool Pretoria West bangenele umbhikisho ngoLwesihlanu ntambama, ngaphandle kwabafundi bakamatikuletsheni abalungiselela izivivinyo zabo, ngokusho kukaBrian Zyster, onguSihlalo wesigungu sokuphathwa kwesikole.
UZyster uthi kungase kwenzeke ukuthi kukhona okushaya amanzi ngalo mbhikisho. “Umbhikisho wangoLwesihlanu waqalwa abafundi abawuhlupho,” usho kanje. “Ukukhathazeka kwami ukuthi obhongoza ngabafundi abamiswa emasontweni amabili adlule, kanti obhongoza sebesebenzisa le nto ukuphazimisa ukufunda.
“Kodwa yonke into isibuyele esimweni namhlanje,” uZyster usho kanjalo. “Oyedwa noma ababili bazamile ukungena esikoleni namhlanje begqoke amabhulukwe abambanayo, kodwa sibathumele ekhaya ngokushesha.”
Ngokuchaza kukaZyster, umbhikisho wangoLwesihlanu waqala ngokuqondiswa izigwegwe kwabafundi ababili, “ababengalawuleki nhlobo”.
Kuthiwa laba bafundi bavele bangenela umbhikisho ngemuva kokuthi babizwa maqede batshelwa ukuthi angeke baze bavunyelwe ukuthi bagqoke ngalolu hlobo.